Carruurtaada iyaga oo yaryar sidee uga dhigi kartaa Kuwa Caaqil Ah Oo Diinta Islaamka Ku Barbaaro.?? | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Carruurtaada iyaga oo yaryar sidee uga dhigi kartaa Kuwa Caaqil Ah Oo Diinta Islaamka Ku Barbaaro.??
Published: August 29, 2016, 12:00 pm
(0) Comments Dad badan bay la tahay ilmuhu in aanay waxba fahmayn oo aan la isku dhibin carbintooda ama sare u qaadista garaadkooda iyo xilkasnimadooda ilaa ay weynaadaan. Soomaalida waxaa dhaqan u ah in ay ilmaha ka eryaan golayaasha dadka waaweyn ku kulmaan. Waxay ku dhahaan: ordaya ka taga dadka waaweyn!.
Dadkeenu ma dareensana in afka ilmuhu ku hadlo uu erey erey u bartay isaga oo aad u yar, ka dibna uu gaaray heer uu si faseex ah ugu hadlo isaga oo aan 2 ama 3 sano gaarin!. Ogow afkaas cidi ma barin ee wuxuu ku bartay la joogista dadka waaweyn iyo jilitaankooda!.
Haddaba ogow in ilmuhu dadka waaweyn ka baranayo cilmi, caqli, waayo-aragnimo, akhlaaq, habnololeed iwm isaga oo aan cidina si gaara isugu mashquulin fahansiinta iyo barista arimahaas. Carabtu ilamaha iyaga oo labo sano jira ayay golaha soo fariisiyaan, waliba waxay ka qaybgaliyaan dooda dhexmaraysa dadka waaweyn; si uu ugu tababarto. Tan kale waxaa loola hadlaa ama loola dhaqmaa sidii nin weyn ama naag weyn. Waxaa loogu yeeraa KUNYAH ( hebel aabihiyow ama hebel hooyadiyey); si loo dareensiiyo inuu yahay qof muhiim ah ama xilkas ah.
Ilmaha waalidku wuxuu siinayaa warbixin, isna wuu waraysanayaa, talo ayaa la weydiinayaa, ama wada tashi ayaa la samaynayaa. Ilmaha waxaa loo xilsaarayaa soo dhaweynta martida, sooryadooda iyo inuu la fariisto oo u sii sheekeeyo.
Dhaqankeena waxaa ku jira ilmaha in lagu qayliyo ama canaan lala dabagalo, taas oo keenaysa in uu niyadjabo ama isu arko qof hooseeya oo aan mudnayn in wax la weydiiyo ama la dhagaysto. Xataa waxa loo tarayo wuxuu u arkayaa dulmi loo gaysanayo waayo waxaa loogu bandhigayaa si cunfi ah: waryaa cun, kac qubayso, bax iskoolka aad iwm.
Gabagabadii waa suurtagale isku day in ilmahaagu isaga oo yar kala garto waxa ku habboon iyo waxa aan ku habboonayn , inuu garto xilkiisa iyo habkuu u gudan lahaa, ogowna inuu wax kasta u baran karo sida uu afka u bartay adoo aan juhdi kaaga bixin!.
Haddii kale u yara sug isaga oo 25 sano jira walaashi canjeela isii ha kula diriree!.
« Warbixinta Ka HoreysayMaxaad Ka Ogtahay Ama Ka Taqaanaa Ahmiyadda ay leeyihiin qisooyinka Qur’aanka iyo kuwa Xadiiska..??	Warbixinta Xigto »Calaamadaha lagu garto kalsooni darada wey badanyihiin waxaase ugu nuhiimsan oo mar kasta la arkaa kuwa	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply